२०१९ मा नेपाली खेलकुदका मुख्य सफलता र असफलता ! | | Neplays.com
२०१९ मा नेपाली खेलकुदका मुख्य सफलता र असफलता !
By Neplays	 Last updated Jan 1, 2020
सन् २०१९ मा ले हामीबाट बिदा लिने बेला भएकाे छ । याे बर्ष नेपाली खेलकुदले धेरै क्षेत्रमा सफलता हात पार्याे । चाहे त्याे प्रतियाेगिता गराउनु हाेस या खेलाडीले पदक जित्नु सबैमा नेपाल सफल नै रह्याे । याे बर्ष मैदान भित्र भएका सफलताका कुराहरू हामी गर्दैछाै ।
तेस्राे पटक सागकाे सफल अायाेजनाः
१३ औं संस्करणकाे दक्षिण एसियाली खेलकुद मंसिर १५ देखि २४ गतेसम्म नेपालका तीन ठाउँमा गरियाे । काठमाडौं, पोखरा र जनकपुरमा भएकाे सागमा नेपालले ५१ स्वर्ण जित्दै इतिहास बनायाे । पदक तालिकामा पहिलाे पटक दोस्रो स्थानमा रहदै हाेष्ट देशकाे इज्जत राख्याे । सागमा नेपालले ५१ स्वर्ण जित्दा तेक्वान्दोले १२ स्वर्ण जित्यो भने १० स्वर्ण करातेले दिलाएको थियो । यसका साथै पाैडीमा गाैरीका सिंहले सनसनी नै मच्चाइन । पाैडीमा पहिलाे पटक सागमा एउटा हाेइन चार चार वटा स्वर्ण दिलाइन । जुन कुनैपनि खेलाडीले हात पारेकाे सबै भन्दा ठुलाे उपलब्धि हाे । उनले ४ स्वर्ण २ रजत र ३ कास्य जित्दै जम्मा ९ पदक हात पारिन ।
महिला भलिबलकाे छलाङ
नेपालमा महिला भलिबलमा निकै कम लगानी हुने गर्छ । अन्तराष्ट्रिय स्तरमा कमै मात्र एक्सपाेजर पाएकाे महिला भलिबलले यसपटक नसाेचेकाे सफलता हात पार्याे । त्याे थियाे, सागमा रजत र एभिसी सेन्ट्रल जाेन महिला भलिबलकाे उपाधि जित्नु ।
पहिलाे पटक महिला टिमकाे कप्तानी गरेकी अरूणा शाहीले नेपाललाइ साे उपाधि दिलाइन । बंगलादेशमा भएकाे साे प्रतियाेगिताकाे उपाधि जितेकाे २ साता पछि महिला भलिबलले घरेलु काेर्टमा रजत जित्याे । जुन अर्काे एेतिहासिक सफलता थियाे ।
विश्वकप छनोटमा सुधारीएकाे प्रदर्शन
नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीले फिफा विश्वकप २०२२ तथा एएफसी एसियन कप २०२३ को छनोटमा पाँच वटा खेल खेल्याे । जसमा नेपालले १ खेलमा जीत र ४ खेलमा हार ब्येहोर्याे ।
नेपालले कुवेतसँगकाे पहिलो खेलमा नेपाल ७–० काे हार ब्यहाेर्दै प्रतियाेगितामा खराव सुरूवात गरेकाे थियाे । तर, चाइनीज ताइपेइलाई २–० गोलले पराजित गर्दै कमब्याक गरेकाे थियाे । त्यसपछि नेपाल अस्ट्रेलियासँग ५–० र जोर्डनसँग ३–० पराजित हुन पुग्याे । तर हरेक खेलमा नेपालले सुधारीएकाे प्रदर्शन गर्याे । एशियन च्याम्पियन तथा बिश्वकप खेलिसकेकाे अष्ट्रेलियासँगकाे खेलले नेपालले सबैलाइ इम्प्रेस पार्याे ।
त्यसपछि हाेम खेलमा रूपमा कुवतेसँग मात्र एक शुन्यकाे हार ब्यहाेर्नु त्याे झन समर्थकलाइ सान्त्वना दिने बाटाे बनेकाे थियाे । तर भुटान उड्नु अघि नेपाली चार जना फुटबलरले गरेकाे हरकतले सबैलाइ अचम्ममा पार्याे ।
विमल घर्ती मगर, अञ्जन बिष्ट, दिनेश राजवंशी र सन्तोष तामाङ टिमबाट हटाइए । उनीहरूकाे कारवाही २०२० काे सुरूसम्म रहनेछ । घरेलु मैदानमा भएकाे दक्षिण एशियाली खेलकुदमा नेपालले स्वर्ण जित्दै लाखाै फुटबल समर्थकलाइ खुसी तुल्यायाे ।
करीव तीन बर्ष अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध खेपेको नेपाल क्रिकेट संघले नयाँ कार्यसमिती पायाे । तर पुरानै अनुहार कार्यसमितीमा अाएपनि क्यानको निलम्बन आईसीसीले शशर्त फुकुवा गर्ने निर्णय गर्याे । असोज २७ गते क्यानको निलम्बन शशर्त फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको अर्काे दिन १ दशक नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको नेतृत्व गरेका पारस खड्काले सबैलाइ चकित पारे । कारण थियाे, उनकाे कप्तान पदबाट राजिनामा ।
अचानक पारसले राजीनाकाे घोषणा साेसियल मिडियाबाट दिँदा धेरै चर्चा भयाे । त्यसमा अबकाे कप्तान काे, के पारस क्यानका पदाधिकारीसँग असन्तुष्ट छन भन्ने प्रश्न सबैकाे दिमागमा चलेकाे थियाे । तर पारसले साे राजिनामा धेरै साेचबिचार गरेर दिएकाे र नितान्त ब्यक्तिगत रहेकाे बताए ।
मैदानमा भने नेपाली क्रिकेट टिमकाे प्रदर्शन खासै राम्राे रहेन । सिंगापुरमा भएकाे टी २० विश्वकपकाे एशिया छनाेटमा नेपाल असफल बन्याे । कतार र सिंगापुरसँगकाे हारले नेपालले ग्लाेबल छनाेटमा स्थान बनाउन सकेन । जसका कारण नेपाली टिमले क्रिकेट समर्थकलाइ निरास बनायाे ।